HLQ Induction Heating Machine, mpanamboatra fitaovana famolavolana
HLQ INDUCTION EQUIPMENT CO., LTD (Anarana taloha: DaWei Induction Heating Machine Co., Ltd) matihanina amin'ny induction Heating machine sy ny milina fantsom-pandrefesana ultrasonic ho an'ny maro hafa mihoatra ny 15 taona. Ireo masinina dia manarona milina fanamafisana sy fametahana milina mandeha ho azy, milina fanamafisam-peo vita amin'ny plastika, milina fanamafisam-peo, milina fanamafisana ny induction air, rafitra miovaova malefaka, lafaoro fanosehana induction auto, rafitra fanamafisana induction feno, alim-by fanalefahana alim-by sy alim-baravarana Tube Welders sy rafitra fanitsiana hafanana. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny hafanana, ny fatorana, ny famonoana, ny famafana, ny famonoana, ny famafana ary ny fanafanana ny hafanana.
Masinina fanasitranana fanasiana apetaho ireo singa elektrika mandroso indrindra sy teknika vaovao avo lenta. Afaka manafana metaly haingana sy ampahany izy ireo. Izy ireo koa dia afaka miditra amin'ny metaly tsy metaly amin'ny metaly hafanana mandra-pihetsiketsiky ny metaly tsy mifandray amin'ny metaly
mivantana. Ampitahao amin'ny fomba fanafanana hafa, ny milina fanodinananay fampidirana dia manana tombony maro: fanjakana feno, fifehezan-tena ary fiarovana-tena. Manomboka amin'ny tsindry sy rano takiana izy io, maka toerana kely kokoa amin'ny gorodona ary tsy mila fotoana fanombohana sy fanidiana firy, fanafanana azo antoka, fitsitsiana tsy misy loto.
Miaraka amin'ny fampandrosoana ny orinasa, ny orinasanay dia mandinika bebe kokoa ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny serivisy aorian'ny varotra. Manaraka tsara ny ISO9000-2000 izahay amin'ny fanodinana anay. Ny orinasanay dia mahazo laza tsara amin'ny milina avo lenta sy tsara.